Chivharo / clsi Type I High Kwakachena Water Factory, Suppliers | China Cap / clsi Type I High Pure Water Manufacturers
musha» Products » Laboratory Equipment » Water Kucheneswa Systems » Chivharo / CLSI Type I yakakwirira mvura yakachena
Smart Rob Hurongwa anogona kubereka Cap / CLSI Type I reagent mvura nemhaka yokuora analyzer.It runoita yakananga kubatana uye kushanda online. Independent Chinyorwa kuzvidzora mvura nzira yokubudisa inogona kushandiswa okuwedzera mafomu.
Pureforce nemharapara (30,70,100L / h)
Poresai Force kwakasimbiswa Pureforce nemharapara womuenzaniso, zvikuru yakakwirira yakawandirwa mvura mhinduro mumarabhoritari. Pakusanganisirawo pamwe electrodeionization module, Pureforce nemharapara anogona kuramba kupa mhando II mvura Yakanatswa
Pureforce nemharapara (150,300,500L / h)
Pureforce nemhara anotaura zvaanoda yepamusoro, magadzirirwo uye utsanzi runobva nhaka kwemakore akawanda centralized kugovera mumarabhoritari mvura.
Pureforce nemharapara inopa yepamusoro inosimbisa mvura vakawanda otomatiki nokukanganisika analyzers panguva imwe chete kuburikidza kuparadzirwa loop